Khabar Kantipur » ढुङ्गा मा अ’ड्किएर नि’क्लिनै सकिरहेका थिएनन् नेपाली सेना ले गर्यो यसरी उद्धार,,,
ढुङ्गा मा अ’ड्किएर नि’क्लिनै सकिरहेका थिएनन् नेपाली सेना ले गर्यो यसरी उद्धार,,,
ढुङ्गा मा अ’ड्किएर नि’क्लिनै सकिरहेका थिएनन् नेपाली सेना ले गर्यो यसरी उद्धारभोजपुरको षडानन्द न.पा.-१, मझुवावेसीस्थित ईर्खुवा खोलानजिक बाटोबाट चिप्लेर ढुङ्गाको चेपमा अड्किएका साल्पासिलिछो गा.पा.-१ का स्थानीयलाई श्री फष्टराईफल गण अन्तर्गत सुरक्षा वेस ईर्खुवाबाट खटिएको उद्धार टोलीले सकुशल उद्धार गरि थप उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल संखुवासभा पठाएको छ।
नेपाली चलचित्र जगतमा दर्शकहरु माझ लोकप्रिय नायिका हुन् पुजा शर्मा । उनी आजबाट २९ बर्ष पुगेकी छिन् । प्रेम कहानी, रामकहानी जस्ता हिट फिल्म खेलेकी पुजाको लाखौ फ्यान फलोवर्स रहेका छन् ।
१. संघर्षको कथा :**
सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेकी उनको बाल्यकाल देखि नै सङ्घर्षपूर्ण भए । बुवाले छोराको चाहना राखेका र उनी छोरी भएर जन्मेका कारण पूजा र उनकी आमा दुर्गाले जीवनमा कहिल्यै परिवारबाट माया पाएनन् ।
श्रीमानबाट माया पाउन नसकेका कारण उनले छोरी पूजालाई भने राम्रो भविष्य दिने सोच बनाइन् । त्यसैले उनी घर परिवार छोडेर छोरीलाई लिएर काठमाडौँ आइन् । पूजाले जन्मेदेखि नै बुवाको माया पाउन सकिनन् । उनलाई आमा दुर्गाले नै आमा र बुबाको माया दिइन् ।
दुर्गाले पूजालाई कहिल्यै पनि बुवाको कमी महसुस हुन दिइनन् । आमाले पूजालाई काठमाडौँमा ल्याएर राम्रो विद्यालयमा भर्ना गरिन् । छोरीलाई राम्रो भविष्य दिन निकै सङ्घर्ष गरेर पैसा कमाइन् । उनले एसएलसी पास गरेपछि पढाइसँगै एउटा एनजिओमा पनि काम गर्न थालिन् । उनले आफ्नो जीवनमा एउटा मोड आएको थाहा पाइन् ।
उनलाई पढाई भन्दा पनि उनलाई अरू काममा रुचि लाग्थ्यो । नाच्ने र अभिनय गर्ने काम गर्न उनलाई मन पराउँथिन् । उच्च शिक्षा पढ्न क्यानडा गएकी उनी पढाइ पुरा नगर्दै फर्किइन् । उनले टुरिजम फिल्डमा लागेर पढ्न र काम गर्न थालिन् ।
२. फिल्मी करियर कसरी सुरु भयो ?**
पूजा सानै देखि सुगम पोखरेलको फ्यान थिइन् । पछि उनै सुगमलाई भेटेपछि अभिनय तर्फ उनको पहिलो पाइला अघि बढाइन् । तर त्यतीबेला उनलाई आफैले गरेको अभिनय भने त्यति मन पर्दैनथ्यो । ‘म्युजिक भिडियोमा समेत काम गर्न लागेकी उनी केही समय पत्रकारितामा पनि लागिन् ।’
त्यतीबेला उनलाई थ्री लभर्स चलचित्रमा काम गर्ने अफर आयो । उनले चलचित्रमा काम गरिन् तर कसैले उनलाई नोटिस गरेनन् । ‘उनले आफूलाई सुनाए अनुसारको कथामा अभिनय गरेको दृश्य नदेखेपछि उनलाई फिल्म क्षेत्रबाट नै मन भाँचियो ।’ तर अन्तत फिल्म ‘प्रेम गीत’ बाट उनी एकाएक चम्किइन् ।
३. पारिश्रमिक कति छ ।**
नेपाली चलचित्र जगतमा एकार्काको नाम जोडिएर आउनु सामान्य कुरा हो । धेरै सेलिब्रेटीहरुको नाम एकाअर्का संग जोडिएर आउँछ । हुन त नायिका पुजा शर्माको जोडी धेरै संग मिल्छ तर फ्यानहरुले भने उनको र आकाश श्रेष्ठको जोडी निकै रुचाएका छन् । पछिल्लो समय यो जोडीबिछ निकै निकटता भएको देखिन्छ ।
समाजिक संजालमा शेयर भएको तस्बिर र भिडियोहरुले यस्तै जनाउछ । पुजा र आकाशको जोडीलाई दर्शकहरुले अत्याधिक रुचाएका छन । आकाश र पुजाले एकसाथ धेरै भिडियोमा काम गरेका छन् । केही समय अगाडि पुजाले भनिन्–‘हामी एक अर्कासँग काम गर्न सहज महसुस गर्छौ । दर्शकले पनि हाम्रो जोडीलाई मन पराउनुभएको छ ।’
प्रकाशित मिति May 1, 2021